Sheekh Cusmaan Barre “ Dowladii Farmaajo dadka waxay ka dhigtay qof cabsi ku nool, qof jeelka la dhigay iyo qof la dilay | dayniiile.com
Home WARKII Sheekh Cusmaan Barre “ Dowladii Farmaajo dadka waxay ka dhigtay qof cabsi...
Sheekh Cusmaan Barre “ Dowladii Farmaajo dadka waxay ka dhigtay qof cabsi ku nool, qof jeelka la dhigay iyo qof la dilay
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka HirShabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed oo ka mid ahaa madaxdii la soo shaqeysay Madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhibaatooyinkii ay HirShabeelle ku qabtay nimaadkii Farmaajo.
Wuxuu sheegay in dowladii uu Farmaajo hoggaaminayey ay kor uga eked dowlad, balse gudaha aan looga shaqey jirin sharci dowladnimo, isagoo sheegay in dadka qaarna la dilay, qaarna ay cabsi ku noolaayeen.
“Dowladii Farmaajo dadka waxay ka dhigtay qof cabsi ku nool, qof jeelka la dhigay iyo qof la dilay, waxay aheed dowladii ugu liidatay tan iyo burburkii, dastuurkii ayey baabi’isay heybadii Soomaaliya ayey baabi’isay,” ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre.
Wuxuu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay cabsi ku joogeen xukunka, halka madaxda dowlad goboleedyada qaarna ay ku baxeen cadaadiskii ay saartay xukuumadii Farmaajo.
“Waxaa ugu daraa HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo cadaadis xun la saaray, markii la cuuryaamiyey maamulladaas waxaa fursad helay Al-Shabaab oo meel kasta u fariistay,” ayuu yiri.
Sidoo kale wuxuu dul istaagay sida uu Farmaajo ugu tuntay dastuurka dalka, isagoo Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay in muhiimad uu siiyo dastuurka oo wadadii uu Farmaajo ku socday uu ka leexiyo dowladnimada.
“Soomaaliya intii Farmaajo xukunka joogay waxaa la iskula joogay xoog, waxaa meel la iska dhigay nimaadkii dowladnimada iyo shuruucdii dalka, waxyaabaha ugu daran ee Madaxweyne Xasan Sheekh sugaaya waxaa ka mid ah soo celinta xiriirkii dowladaha caalamka, maadaama uu dalkeenu weli tabar yaryahay,” ayuu yiri Sheekh Cusmaan.
Previous articleWasiirka arrimaha dibadda Ruushka oo sheegay in ay dib u riixi doonaan ciidamadda Ukraine inta ay reer galbeedka wadaan in hubka riddada dheer usoo diraan Ukraine.
Next articleErgayga gaarka ah ee Gurmadka Abaaraha oo la kulmay Madaxda Hay’adaha Q.M
Taliye Odawaa oo shaaciyay sababta sanadihii la soo dhaafay loo qaban...
SAWIRO:- Wafdi horudhac u ah safarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray...
Wafdi ka qeyb galaya Munaasabadda Caleema saarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo...
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo u yeeray Wasiirka Batroolka Somalia